Ibhulogi - Isitolo esiku-inthanethi se-CBD
I-Delta 8 ne-Delta 10 THC IZINDABA, OkushaBy james baines September 1, 2021
Ngabe i-Delta 8 THC ingakusiza wehlise isisindo? Isindatshana Orginal Kuthunyelwe Ku-. https://hightimes.com/sponsored/8-reasons-to-try-delta-8-thc-before-its-too-late/?amp Delta-8 Ukuthandwa kwe-THC kukhuphuke kakhulu, kepha izinsuku zayo zibonakala zibaliwe. Yize i-Delta-8 THC isemthethweni ezingeni likahulumeni, izifundazwe eziningi ziyavinjelwa noma zikhawulela ukuthengiswa kwazo e-United States. Uma usengathenga iDelta-8 THC lapho…
Umenzeli we-GPFN Q DecodeBy james baines August 31, 2021
Umbiko Wenyanga Wobunhloli we-Agent Freak Nasty Ungakhohlwa ukuhlanganyela nabangani bakho noma umane ubatshele ukuthi baye ENANINI YOSESHO bese uthayipha i-Agent Freak Nasty ukuthola okunye kwalokhu #SpookPorn. Ungangilandela nakuTWITTER @ laconic93 Sithole OKUNINGI okufanele sikwenze kulenyanga edlule, i…
Umenzeli we-GPFN Q DecodeBy james baines July 26, 2021
Sanibonani, Bangani, kanye nabaSnitches lo ngumakhelwane wakho we-SPOOK hacker alias i-Agent Freak Nasty esakaza i-PIRATE SIGNAL yami esuka e-DEEP ngemuva kwemigqa yezitha., Ngiyabona ukuthi anginaso isikhathi esanele sokwenza imibiko ye-Intelligence yamasonto onke ngakho-ke ngizoyishintsha imibiko yanyanga zonke. Ngaleyo ndlela ngingakutholela lokho #SPOOKPORN kulungiswe…
Umenzeli we-GPFN Q DecodeBy james baines June 28, 2021
Sanibonani. Lo mbiko we-Intel uzoba ngomunye omuhle. Ukugxila emibikweni evela ku-RealRawNews.com nakweminye imithombo yezindaba. Kulabo kini abangamazi uDkt.Piecznick uyiSUPER SPOOK. Umbhali uTom Clancy wabeka umlingiswa wakhe uJack Ryan ngemuva kwemishini yakhe yangempela. Uma uwabonile ama-movie, Hunt For Red October,…
I-Delta 8 ne-Delta 10 THC IZINDABABy james baines June 19, 2021
Umbuso waseTexas Ugunyaza I-Delta 8 ne-Delta 10 Imikhiqizo ye-THC Ngu: Eran Hami Kuthunyelwe ngo-8: 56 PM, Jun 07, 2021 Kugcine ukubuyekezwa ngo-8: 21 PM, Juni 07, 2021 CORPUS CHRISTI, Texas - Okusha okubizwa nge- “Diet Ikhambi lokhula ”lizohlala lisemthethweni esifundazweni saseTexas. IDelta 8 kanye nezinye iTHC…
UkukhangisaBy james baines June 16, 2021
Izilinganiso Ezinkulu ze-CBD Zisiza Izinduku Zinciphise Ukudla Kwemeth Ukufundwa okusha ku-Journal of Psychopharmacology kunikeza ubufakazi bokuthi i-cannabidiol, ingxenye yensangu, ingavimbela isisusa sokudla i-methamphetamine kumagundane. Okutholwe kuqala kusikisela ukuthi into engaba wusizo ekulweni nokulutheka yi-methamphetamine, eye yaba enye yezinto ezivame kakhulu…
I-CBD yokubuyiselwa kwemisipha
Izindatshana Ezihlanganisiwe ze-Emperor RedBy james baines June 16, 2021
I-CBD ye-Muscle Recovery Cannabidiol eyaziwa kangcono njenge-CBD iya ngokuya ithandwa kakhulu njengoba umphakathi uqala ukubona inzuzo yomlingani ongasebenzi ngokomzimba we-THC ongasetshenziselwa ukubuyiswa kwemisipha ngemuva kokuzivocavoca. I-CBD itholakala yonke indawo muva nje. Ungayithola kumakhukhi, ikhofi, uwoyela we-tincture,…
I-CBD Oyili Yezinhlungu
OkushaBy james baines June 16, 2021
I-CBD OIL YOBUHLUNGU Le ndatshana yenzelwe ukufundisa nolwazi kuphela. Lo mbhalo awuhloselwe ukunikeza izeluleko zezokwelapha noma ukufaka esikhundleni sezeluleko zikadokotela wakho oyinhloko. Bonke ababukeli balesi sihloko bayelulekwa ukuba babonane nodokotela babo noma ochwepheshe bezempilo abaqeqeshiwe. I-Redemperorcbd.com noma izinkampani zayo ezingabazali zithatha umthwalo nganoma iyiphi…
I-CBD Nenkinga Ye-Opioid
Umbiko omusha osatshalaliswe kuleli sonto wamanje unikeze imininingwane emisha yokuthi i-cannabidiol itholakala kanjani ku-cannabis, ebizwa nge-CBD, ingasiza ekuhloleni isimo esiphuthumayo se-narcotic emhlabeni jikelele. Imiphumela engemuva kokuhlolwa okusatshalaliswe kuleli sonto lamanje kuyi-American Journal of Psychiatry iphakamisa ukuthi i-CBD ingasiza ekwehliseni ukungakhululeki nezifiso okuhlangabezwane nazo…
Umdlavuza "Uzibulala Ngokuzidla" Ngemuva Kokuvezwa Insangu
UChristina Sanchez, isazi sezinto eziphilayo zamangqamuzana asuka eCompultense University eMadrid, okokuqala wabika ngo-1998 ukuthi iTetraHydroCannabinol (THC), okuyisici esiyinhloko sokusebenza kwengqondo ye-cannabis, igqugquzela ukuzibulala kwamangqamuzana e-tumor ngenkathi ishiya amangqamuzana aphilayo angenawo ama-tumor wodwa. amangqamuzana wesimila awagcinanga ngokungezelela ukwanda futhi akhule kodwa futhi azilimaza, zombili elebhu…